Landela uhambo lwethu oluya e-Europe futhi uthole ukuthi yisiphi isiteshi sesitimela esiphambili kunazo zonke eYurophu. Usuzothola lapho ungalalela khona iVivaldi nokuthi ungakulinda ngasiphi isiteshi sesitimela ngasemfuleni ukuze isitimela sakho siye e-Italy.
Ngaphezu kwe 500,000 abagibeli badlula eHamburg Hbf (IHbf isinqamuleli esiya eHauptbahnhof esihumusha esiteshini saseCentral) esiteshini sesitimela eJalimane. Ngakho, kuyisiteshi sesitimela esikhulu kunazo zonke eYurophu.
Enye into eyenza lesi siteshi sesitimela simatasa kakhulu eYurophu ukuthi empeleni kukhona ukuxokozela & impilo yasedolobheni ephithizela ngaphakathi esiteshini. Ngokwesibonelo, kuya ngesikhathi sakho sohambo, ungase ukujabulela izimakethe zikaKhisimusi and street parades.
Ifana nezinye iziteshi zezitimela zomhlaba wonke kuhlu lwethu, kukhona ihhovisi lokushintshana ngemali, ihhovisi lamathikithi, ukugcinwa kwemithwalo, isikhungo semininingwane yabavakashi, ne-inthanethi ye-Wi-Fi esiteshini sesitimela saseZurich. Ngakho, uma ukhohlwe ukupakisha okuthile okwakho iholide eSwitzerland, akukho okukhathazayo ngoba esiteshini ungathola konke.
Duzane 127 abagibeli abayizigidi bavakashela isiteshi sesitimela eMunich minyaka yonke. This outstanding number makes the station one of the busiest train stations in Europe.
Ifana nezinye iziteshi zezitimela ezishiwo ngenhla, isiteshi sesitimela saseMunich sinikeza izindawo eziningi nezinsizakalo kubahambi. Ngokwesibonelo, ungathola izitolo zokudla, izitolo zezipho, ngisho nezingane & imnyuziyamu yentsha esiteshini sesitimela.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi “Top 5 Izindawo zokudlela ezihamba phambili zesitimela eYurophu” ungene kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit nge isixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbusiest-train-stations-europe%2F%3Flang%3Dzu ‎- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
BusiestTrainStations TrainStation umagazine nbangibhabhi umagazine